नयाँ वर्ष कि नयाँ 'म'? :: बाल जोशी :: Setopati
नयाँ वर्ष कि नयाँ 'म'?
बाल जोशी पुस १७
विश्व भरि आज अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाइँदैछ। हरेक वर्ष आउँछ यो नयाँ वर्ष- प्रत्येक पटक नयाँ उत्साह र उमङ्ग बोकेर। मैले सधैँ सोचेँ - अब त केही नयाँ हुन्छ, नयाँ वर्ष जो आएको छ।
वर्ष भरि नयाँ लुगा लगाउन पाउने र नयाँ परिकार खान पाइने विश्वासले सानैदेखि मलाई नयाँ लुगा लाउनुपर्थ्यो, नयाँ परिकार पनि खानु पर्थ्यो।
तर, मैले सानोमा बुझिनँ- नयाँ वर्ष त एक हप्तामा नै पुरानो हुन्छ भनेर - अनि पर्खिनुपर्छ अर्को नयाँ वर्ष। अहिले बुझेँ - आवरण नयाँ होइन, खोजेको त आचरण नयाँ रहेछ।
यदि आवरण र आचरण बिचको भिन्नता हामीलाई थाह भइदिए समग्र जीवन अति सुन्दर हुन्छ। जीवनसँगको हाम्रो लडाई आवरण 'सुन्दर' गर्न तिर नै छ। यदि आचरण 'सुन्दर' गर्न थोरै मात्र प्रयास भए जीवन सङ्घर्ष नभएर उत्सव होला ।
आवरण राम्रो देखाउने ब्यापारमा हामी आचरणको लिलामी दिइरहेका छौ। अरुको अघि आफुलाई राम्रो बनाउने होडबाजीमा आफ्नै अघि धेरै तल खस्केको थाह नभएर समस्या झन् बढ्दै छ। उद्देश्य आचरण राम्रो बनाउने होस्।
आज र भोलि नयाँ वर्षको शुभकामना आदान-प्रदान व्यापक रूपमा हुनेछ। अझ, सामाजिक सञ्जालले 'क्रान्ति' नै ल्याएको छ यो क्षेत्रमा। सुन्दर पक्ष हो यो सामाजिक सञ्जालको। चिनेको- नचिनेकोलाई पनि शुभकामना बाट्न पाउनु। तर, 'कपि-पेस्ट' शुभकामनाहरू कति शुभ मन र शुभ विचारले प्रेषित हुँदैछन्? कहिले यो प्रश्न गर्नु भएको छ? तपाईँले पठाएको शुभकामनामा तपाईँको आफ्नो शुभ सोच कति छ? या त त्यो मात्र 'रुटिन' थियो?
शुभ सोच बिनाको कामना के साँचो कामना होला र? अर्का प्रति साँचो अर्थमा शुभ चिताएर दिइएको कामनाको नै मूल्य छ।
फगत प्रक्रिया पुर्‍याउनका लागि प्रेषित सन्देशहरू बिना प्राणका शरीर हुन्। शब्द मात्र थुपारिएका- मुर्झाएका फूल जस्ता। नयाँ वर्षको सुरुवात सायद 'सही' शुभकामनाबाट हुनुपर्ने थियो कि?
त्यसै पनि आधुनिक विज्ञान र प्राचीन अध्यात्मले भूत- भविष्य र बर्तमानलाई एक भ्रम मानेको छ। तपाईँ हामीले मनाउने 'नयाँ वर्ष' आखिरमा पात्रोमा भएको परिवर्तनको प्रतिबिम्ब न हो।
पात्रो मात्र फेरिरहने त क्रम सदियौंदेखि छ। कतै नयाँ वर्षको सन्देश पात्रो होइन, पात्र परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पो हो कि? सायद समयलाई नयाँ पात्र चाहिएको होला ? हिजोको भन्दा आज बदलिएको असल र गुणी पात्र।
नयाँ वर्षलाई आधार बनाउँदै आगामी वर्षका लागि चरित्र बदल्ने प्रण, न्यु इअर रिजुलसन, गर्ने परम्परा संसारभर छ। यद्यपी अधिकांश प्रणहरूको आयु छोटो छ, तर, प्रण मार्फत पात्र बदल्न खोज्ने यो परम्परा आफैमा सुनौलो छ। आखिर सुरुवात त भयो नि। निरन्तरता पछिको विषय भयो। तर, चाहे अनुरूप प्रणहरू हाम्रो जीवनको प्राण बनेर बसेको भए पात्र त त्यसै परिवर्तन हुन्थ्यो नि है ?
हरेक वर्ष आउने यो नयाँ वर्षले हामीलाई कतै प्रणलाई प्राण बनाउन सिकाउन त खोजेको छैन?
उत्तम प्रण जब जीवनको प्राण बन्छ, तब फेरिन्छ आचरण। पात्रोमा नयाँ वर्ष देखिएला, तर आचरण परिवर्तन नभए सम्म पात्रमा नयाँ वर्ष कहिल्यै आउनेछैन।
समयले मागेको नयाँ वर्ष कि नयाँ 'म'?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस १७, २०७५, १०:३०:००